Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wuchaa RAAM? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ram igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta nye nsogbu
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wuchaa RAAM?
Nri maka ndị otu na-akwado ọrụ. Iji mmadụ isii na-arụ ọrụ, na-agụta oge njem maka mbido na ụlọ site naimecha, na-ekenye 16 ụbọchị maka ngụkọtaOKWUnkwa, ị nwere ike, na nkezi, na-azụ mmadụ $ 15,00 kwa ụbọchị. Nnukwu ego bụ $ 1,440.00.
ị na-abịaru nso iche GPS na-egosi ya ọsọ e dere na ị na-adịghị oge dị ukwuu ka anyị na-aga na anyị fọrọ nke nta dahey ihe na-aga ndị mmadụ hey Leon ebe a na taa m na-akpọ Gears nke WarUltimate Edition na Xbox One na m ka rutere na njedebe nke afọ mbụ nke agha ahụ, achọrọ m igosi gị ụmụ nwoke otu m si emeri General Rome na m mere otu ihe ahụ maka ụdị 360 mgbe m na-egwu ya, ị mara mgbe ọ bịara ọpụpụ na ihu ọma m na-achọ ya Dị ka ị hụgoro na m nwere ụta torque ma n'oge a ka m na-achọ ogologo oge ebe egbe sinipa dị n'ebe ahụ na nke ahụ bụ n'ezie ihe niile m ga-akwadebe onwe m maka primaries bụ ụta torque na sinipa sniper na ajụjụ ole na ole oge ụfọdụ achọrọ m ka ha nwalee etu m ga-esi akụ rom, a na m ekwu, ọtụtụ oge m meela ya nke ukwuu karịa ka m chọrọ na isi m na-eburu onwe m ọtụtụ torque arcs na otutu egbe mgbapu on, ka nwetere ya oh yeah right here wow heyso ri I chọrọ gbaa a torque igbu atom ugbu a na mgbe ahụ krill ga-agbapụkwa na ya na mgbe ahụ n'ụzọ bụ isi ihe niile m ga-eme bụ naanị snap na sinipa égbè elu gbaa ya na dị nnọọ kụrụ ya n'ụzọ m nwere ike. Thezọ o si, ọ na-aga ebe a ugbu a. Echetara m na ị nwere ike ịme nke a n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ ihe nkịtị ma ọ bụ onye nzuzu, n'ihi na ọ bụrụ na m na-echeta n'ụzọ ziri ezi ị kpọghee ya n'ozuzu ROM na Gears nke Warto ị ghaghị imeri n'ozuzu ROM na ara na ọ bụrụ na ọ bịaruru gị nso ị nwere ike ịgbara gaa n'akụkụ nke ọzọ ma kwughachi otu ihe ahụ, mana ị ga-enwe ike iwepụ ha ngwa ngwa n'agbanyeghị ụdị ọnọdụ m maara na ọnọdụ nzuzu dị ogologo, mana ị kwesịghịkwa ime nke ahụ siri ike, emere m na tupu na nke ochie na mbụ Gears nke War na 360.
Naanị m na-eji ya edezi ahụhụ anyị maka na egbe égbè ahụ. Mee ka m mata otu ị masịrị Ultimate Edition of Gears of War ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mkpọsa ahụ, gwa m na m ga-akpọtụrụ ha, ozugbo m nwere ike ịkele gị maka ikiri na ga-agwa gị okwu ma emesịa nụchaa njedebe ma dọọ ịdọ aka ná ntị na ị ga-emebi. Ọ bụrụ n’achọghị ịhụ njedebe nke ụdị Noori, pịa ugbu a site n’edemede ahụ. Ka anyị gaa ka anyị chọpụta ntakịrị ihe taa Ngwa gị akụrụngwa nke ọma etinyela bọọlụ mkpuchi nkpuchi anyị bibiri onye iro nke agha a were ọnụ dị arọ n'aka ndị ọzọ adọkaala ụwa anyị, mana ị nwere okwu m na anyị ga-ebili ọzọ, ha aghọtaghị, ha amaghị ihe kpatara anyị ji ebuso agha a agha, ihe kpatara na anyị enweghị ike ịkwụsị, agaghị akwụsị, gịnị kpatara anyị ji alụ ọgụ ma na-alụ ọgụ ma na-alụ ọgụ ruo mgbe anyị meriri ma ọ bụ nwụọ ma anyị anwụghị ma ọ bụ gị
Kedu ihe ndekọ RAAM?
Na 1986, Pete Penseyres setịpụrụ oge niileOKWUososondekọnke 15.4 mph n'elu usoro nke 3107 kilomita na oge nke 8d 9h 47m. Ọ bụndekọoro akada ke se ibede isua 20 idahaemi.
Ogologo oge hà arossaa n'ofe America?
tour de france biker ụkwụ
Ego ole ka ọ na-eri iji mee RAAM?
Ndị na-agba ọsọ ga-agafe 3000 kilomitan'ofe12 na-ekwu ma rịgoro ụkwụ 170,000 kwụ ọtọ. Ndị na-agba ọsọ otu agba nwere ụbọchị itoolu ma gwụchaa n'ihe dị ka ụbọchị asaa na ọkara. Ndị otu ganọkwasiKilomita 350-500 kwa ụbọchị,ọduọn’akwụsịghị akwụsị.
Ram bụ nnọọ ihe gbanwere ahụmahụ m. Ọsọ ahụ dị nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere agbụrụ ọ bụla ọzọ m meworo na ị nwere ike ịnweta mba ahụ, ọ bụghị naanị ịhụ ya, atụghị m anya na otu ahụ ga-abụ ihe ọ bụ, otu izu iji nọrọ n'okporo ámá na ndị mmadụ nkwadebe tupu oge eruo na mgbe ahụ njem n'ụlọ mgbe emechara ya bụ naanị ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa na ndụ na-agbanwe ma echere m na n'agbanyeghị ihe ị maara m mere ndị enyi na m ga-enwe mgbe ebighi ebi Ram bụ karịa ka m tụrụ anya na enwere ọtụtụ ọkwa dị iche iche. ọ bụghị naanị ịpụ na ịnya igwe igwe abụrụ m onye nkịtị nke nwere ihe mgbaru ọsọ wee setịpụ ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ihe egwuregwu, enwere m mpako na ị ga - emekọrịta na ndị otu gị, ị ga - emekọrịta na ndị ọrụ gị, ị ga - adị njikere. Yabụ ọ nweghị ihe ị kwadebere maka ndụ gị na ị ga - akwụsị Ram bụ mmetụta na-enweghị atụ nke mmezu na afọ ojuju.
Mickey Diamond mbụ Tour de France motocross na supermoto onye mmeri na m hụrụ n'anya mgbe niile na-ekiri ihe omume a na ọbụna mgbe ọduọ m ka na-ele na m bụ na a mmefu ego na zụta ụfọdụ mma anyịnya igwe na m ghọrọ ọzọ nwetara risịrị na-agba ịnyịnya na ọzọ racer, Ihọd aha ya bụ Mike Bell na ọ maara ọtụtụ ihe banyere ịgba ịnyịnya ígwè na ọ kpọgara m n'ọkwa ọzọ na Joe Law bụ onye dị iche na ọ gbazinye m igwe kwụ otu ebe na m na-agba ịnyịnya ígwè na ọtụtụ ịnyịnya Joe na nke ahụ mere ka m gafee 2000 ruo na mbubreyo 2007 na mgbe ahụ M zutere Brenda Lyons Brenda Lyons bụ ọkachamara lara ezumike nká ọkwọ ụgbọ ala, ọ kụziiri m ihe banyere ịgba ịnyịnya ígwè n'ime otu afọ karịa mgbe m maara na dum 80 na 90, mgbe m gbalịrị motocross na zụrụ ike na m mkpa n'ezie ịzụlite ka mma mụ na onye na-agba ịnyịnya ígwè haziri onwe m ụfọdụ ụgbọ mmiri, m dị ka njem 40 kilomita, mgbe ụfọdụ n'ime ndị m ghọtara na ọ na-egbochi ya na nwoke, ọ na-agba m ụkwụ, enweghị m ike ikwe ka emeso m dịka merụrụ m na m zoro ezo pụọ ihe d Achọrọ m ịrụ ọrụ karịa ma ọ bụrụ na mụ na Brenda aga m agba mbọ ijide onwe m, ọ bụrụ na m laa, aga m agbanye oke m mana ọ ka ga-akụ m aka na-eme m ugbu a ma achọghị m ibido ma mechaa agbụrụ a na achọghị m ị smokeụ sịga ma ọ bụrụ na ịmara na achọghị m ịbata dịka n'oge akara aka Achọrọ m ime nke ọma, m na-anya ụgbọ ịnyịnya ma enwere m oge nhazi na m na-anwa ịdebe ya ịnọ na ngwụcha izu a, m na-eme ụbọchị 150 n'usoro ma emebeghị m ya, yabụ a ga-enwe obere ntụpụ ụkwụ oge ọ bụla m dị otu narị narị echiche m dị mfe ugbu a, dịka nke ahụ na-arụ ọrụ ọtụtụ ndị nwere Ahụm amam na-arụsi ọrụ ike ma nwee obi ụtọ ịmara ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya igwe saịtị RAM ma ọ bụ Whorace na mgbe ahụ enwere m echiche nke m gbasara ihe m gụrụ na ihe m mụtara banyere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aga nke ọma bụ ndị nọkwasịrị Ram ọtụtụ oge na ndụ m Enwere m onwe m ọsọ ma merụọ onwe m ahụ maka afọ a, m ga-eso Ramrace, na-atụ anya na m na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ga-abanye d nweta ihe niile m nwere ike na ihe niile Nweta ahụmịhe ma banye ihe niile. Mgbe ebule na-agba ọsọ na June, Achọrọ m ime otu n’ime ihe ịma aka ịma aka 200 ma emesia m ga-eme ihe ịma aka nke 400 kilomita tupu njedebe nke afọ ka m nwee ike tozuo maka 2014 mgbe m dị obere ka m gosipụtara na nku nwere ala ma na-anya ụgbọala ma ahụ dị m mma ma ọ bụ. Enwere m ọtụtụ talent na ọgba tum tum ka m wee ghara ịrụ ọrụ nke ahụ, ụfọdụ n'ime ha pụọ, mgbe m dere akwụkwọ maka Honda mgbe m na-eri nri n'ụdị nnukwu igwe kwụ otu ebe, ọ bịara dị mfe enweghị m ekele maka ya na nke ahụ bụ nnọọ ihe nwute, ma m na na na Ihọd ọzọ otú m ga-akwadebe maka ọtụtụ ihe na-amụta n'etiti ugbu a na 2014 mgbe m mpi, ma m na-aga na-mkpa ka webata na-enweta site ikpe na njehie ihe ọ bụ na ime ihe n'eziokwu, kedu ka ị ga - esi mee nke ahụ maka ọsọ ọsọ 3,000, ikekwe usoro isiokwu Challenge bụ akara m kachasị mma banyere ihe m na - abanye na ahụike gị na igwe kwụ otu ebe mgbe ike gwụrụ gị na arụmọrụ gị mgbe ahụ ihe na-abawanye na mgbe ahụ ị nwere ike iti n'ihi na ahụike gị n'ụzọ.
Gba ịnyịnya ígwè dị otu narị kilomita ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma na ị rịgoro ọtụtụ ga-abụ ihe nhata nke asọmpi siri ike nke na-alụ ọgụ na egwu motocross maka nkeji 40 enweghị m mmeri ihe m meriri n'ihi na anaghị m ege ntị na Abụ m onye isi ike ma na-enwu ọkụ, mana abughi m onye nzuzu, m ga-ege ntị ma enwere m obi ebere nke onye ọ bụla m na-arịọ maka enyemaka, nduzi ma ọ bụ enyemaka site n'aka onye ọ bụla mgbe m na-agba ịnyịnya igwe ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè karịchaa mgbe mmadụ nwere ebule nwere ụdị ihe ọmụma niile na enweghị m, echere m na nsonaazụ ya bụ na m chọrọ ka ntakịrị ihe ọ bụla na-eche ma gbaa akaebe ya na achọrọ m ịkwụsị ya, nke m ji kwadebe ihe niile m nwere ike ime ugbu a, anyị na-ewebata gị ndị otu na ndị anyị ga-eso ma dee ahịrị Christophe Strasse bụ onye na-eme egwuregwu ezumike Racer site na imeghe Austria ọ bi ugbu a ebe dị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè na Graz, Austria na ókèala na Slovenia, mgbe ọ tara ahụhụ DNF n'ihi oyi baa na RAM mbụ ya na J Na 2009, Christoph laghachiri iji merie R m nọ na 2011 ma gwụchaa onye na-agba ọsọ na 2012 mgbe ọ dị afọ 20. Christoph maara na otu ụbọchị na ya ga-esonye na Ram mgbe ọ gbalịchara agba ọsọ 24 nke mbụ ya na 2002 na mmekọrịta Alten nwere ọrịa n'ihi agụụ maka na-agba ịnyịnya ígwè, mgbe ahụ ọ malitere ịnya agbụrụ ndị toro ogologo dị ka agbụrụ n'ofe alps ma na 2007 meriri asọmpi egwuregwu ụwa na-agba ọsọ ma tozuo maka ebulu abụọ ahụ. Onye kacha ochie na-agba ịnyịnya ígwè bụ naanị 30 afọ ma mechaa ihe karịrị 30 ịgba ọsọ ịgba ọsọ, dị ka ọ dị ugbu a Onye mmeri Aries Rito chọpụtara na ọ gbasiri ike na njedebe nke ogologo njem ma n'oge na-adịghị anya ọ nwetara nje virus na-agba ịnyịnya ígwè.
Mmeri ya na agbụrụ ya n'elu Alps na Tour-Tour na 2011 gosipụtara na ịgba ịnyịnya ígwè bụ ọzụzụ kachasị ike n'ihi ike echiche ya, yana ọnọdụ ziri ezi ịlaghachi na June a na olileanya maka ọhụụ ya, US na ihe na-erughị 8 ụbọchị iji gafee n'eziokwu, Chris Ragsdale ga-abụ ọhụụ RAM na June a, na-amalite site na arụmọrụ dị egwu na ịgba ịnyịnya ígwè, gụnyere ndekọ ụwa 1000-kilomita na 2010 na elekere elekere ise nke 24 - Wins sitere na Grand Haven Michigan ma bi ugbu a Seattle Washington Chrisbalan ces ọzụzụ na ọrụ ya oge niile na ịmalite ezinụlọ Chris anaghị eche mgbe niile ka Ram bụ agbụrụ ya, n'agbanyeghị na ọ bụghị ajụjụ gbasara ikike ya Paris Brest Paris bụ oge ntụgharị nke mere Chris chọrọ ịchọta Ihe o nwere ike iji RAM ma lekwasị anya na ihe ga-ekwe omume t eleghara ohere ndị ahụ anya ma jiri ikike ha zuru ezu maka RAM 2013 Team Four Mill. Ndị agha jikọrọ aka kpebisiri ike ịtọọ Ram ọhụrụ d nke ọnwa Juun a yana ịsọpụrụ ndị ha metutara na ndị ahọpụtara ịkwado ha, ndị otu ahụ hụrụ ọsụsọ na akụrụngwa dịka otu ụmụ nwanyị niile nke ụmụ amaala Colorado anọ, mgbe ha gbasịrị ọsọ ọsọ na 2010, ha ga-eche ihu ihe ịma aka nke RAM ma bụrụ ndị mbụ na ọgba tum tum ha na 2012 na mbọ mbụ ha setịpụrụ ndekọ, dọtara ọtụtụ nkwado mpaghara ma nwee mmetụta dịka m mụtara ọtụtụ ihe banyere agbụrụ ahụ na gbasara onwe gị na June nọrọ na-ege ntị maka ihe omume - na-abata Eprelyou
tour de France ọgba tum tum
Ọnye na-bụ RAAM?
Windobụ Avatar nke asaa nke Vishnu na okpukpe Hindu. Ọ bụ dike nke akụkọ mgbe ochie nke Hindu, The Ramayana (site na Sanskrit: Njem nke Rama). Na akụkọ a, a mụrụ Rama na Ayodhya. Nna ya bụ Eze Dasharatha.
Kedu otu ọsọ ị nwere ike isi gafee America?
ifufe n'azụgịna mpempe akwụkwọ - 25 mph. ikuku na ihu na flat - 12 mph. enweghị ikuku na ụlọ - 17 mph. nkezi - 13 mph.12.11.2015
Onye bu onye mbu gbaburu America?
Rob Pope bụ ezigbo ndụ Forrest Gump. Ọ bụ yaonye mbumgbegbaba n'ofeUnited States nkeAmerịkaugboro anọ n'ime otu afọ ma nweegbaa ọsọihe karịrị 15,000 kilomita dị anya na njem ya.12bọchị 12 2021
Kedu ihe bụ ndekọ maka agbụrụ gafee America?
Ruo ọtụtụ afọ, oge kachasị dị mkpirikpi maka ịgafe United States bụ nke onye ọrụ gọọmentịOKWU, nke Michael Secrest dere n’afọ 1990, n’ime ụbọchị asaa, awa iri abụọ na atọ na nkeji iri na isii. Ọzọkwa, nke andekọe warara nkpabi na 2013 siteOKWUonye mmeri Christoph Strasser, onye n'afọ 2014 setịpụrụ akara nke ugbua 7:15:56.
Gịnị ka aha nna Ram pụtara?
Ọ pụtara: na-atọ ụtọ; nke kachasị elu.Ramdị ka nke nwataahana-akpọebule. Ọ bụ nke Sanskrit na Hibru, napụtarankeRam'na-atọ ụtọ; nke kachasị elu '. Akụkọ ifo: dị ka oge nke asaa nke Vishnu.
Raam ọ bụ okwu?
OKWU, ma ọ bụWindobụ ego na-eburu ya na ego obodo nke Stichting Maharishi Global Financing Research, bụ ntọala ọrụ ebere na MERU, Holland. Ọ bụkwa 'ego mmepe ụwa' nke Global Country of World Peace.
Kedu mgbe agbụrụ Redmond Ramrod ọzọ na-amalite?
A kagburu ndebanye aha lọtrị na-abịanụ ugbu a mana ọ ga-alaghachi na Machị, 2022. Maka ndị na-ejide ndebanye aha mmemme 2020/21 RAMROD, anyị ga-amalite usoro nkwụghachi ụgwọ ndebanye aha (mwepu ihe anaghị akwụghachi na ụgwọ azụmahịa).
Kedu egwuregwu ịgba ọsọ kachasị mma maka RAM 2GB?
Egwuregwu kachasị mma maka 2GB RAM PC 1 Paradise Paradise. Burnout Paradise bụ egwuregwu vidiyo na-emeghe ụwa, nke Egwuregwu Criterion mepụtara. 2 Ọkwọ ụgbọala San Francisco. Ọkwọ ụgbọala: San Francisco dị na nọmba anyị asaa na ndepụta nke egwuregwu iri na-agba ọsọ 10 kacha elu. 3 Mkpa Maka Ọsọ: Nchụso Na-ekpo ọkụ. Ihe ndị ọzọ
Kedu ihe mere ụlọ egwu ịgba egwu ramrod ji kpebie ịkagbu?
Ihe mgbochi na nhọrọ nhọrọ jikọtara ya na ejighị n'aka na-ejigide gburugburu nchekwa, nnukwu ihe omume n'oge ọrịa a emeela ka anyị kpebie ịkagbu RAMROD na 2021. Anyị ga-atụfu ọzụzụ, na-anọkọ ma na-eme emume ị rụzuru na July.